होमपेज / कला / नेपाली फिल्म / छापामार हिरोइनको डायरी
छापामार हिरोइनको डायरी	22 May 2013 | 10:33am बुधबार ८ जेष्ठ, २०७०
सन्तोष रिमाल Be the first to comment! 12345 (0 votes)
माओवादी जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा थियो। 'एक घर : एक छापामार'को माओवादी उर्दीले सुदूरपश्चिमको धनगढी बजार पनि त्रसित थियो। छोरीलाई काठमाडौं पढ्न पठाएर अभिनेत्री ऋचा शर्माका बाबु ढुक्क थिए। ऋचा भने गृहनगर खुब मिस गर्थिन्, छुट्टी भयो कि घर फर्कन हतार। नजिकैको पुलिस चौकीले उनको परिवारलाई सुरक्षित र त्रसित दुवै तुल्याएको थियो। सहरका व्यापारीको अपहरण र हत्याका समाचारले डर बढाउँथ्यो। फिल्मले कल्पना गरेकै जस्तो छापामार भेटिन् ऋचाले। आर्मी दाजुकी माओवादी बहिनी, फरक विचारधारले छुटिनुपरेको, अझै पेटमा अड्किएको गोली बोकेर हिँडेकी ती छापामारबाट धेरै जान्ने आशा पलायो। त्रासको पारो चढ्दै गएको बेला ऋचा घर पुगेकी थिइन्। चन्दा आतंकले उनका व्यापारी बाबुलाई पनि अत्याएको थियो। ऋचालाई बाबुले डरको सुइँको दिएका थिएनन्। बेलुकी नौ बजे परिवारका सबै एउटै कोठामा जम्मा भएर गफ गरिरहेका थिए, गोली चलेको आवाज आयो। 'पहिलोपल्ट साँच्चिकै डरको अनुभव गरें, मृत्यु नजिक आएजस्तो लाग्यो,' छिरिङरितार शेर्पाको फिल्म 'उमा'की छापामार ऋचासँग पनि १० वर्षे जनयुद्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएका घटनाहरू छन्। 'दोहोरो फायरिङको आवाजले साह्रै तर्सायो। सबै भुइँमा गुटुमुटु पर्यौंप, धेरैपटक ढोका ढकढक्याएको आवाज आयो, हेर्न जाने हिम्मत कसैमा भएन,' ऋचा ठान्छिन्, 'म हुर्किसकेकी थिएँ, जवान भइसकेकालाई माओवादी र आर्मी दुवैतिरबाट उत्तिकै खतरा थियो।' उनको घरमा भाडामा बस्ने पिस्कोरका स्वयंसेवकले जिससको र अरूले हिन्दु देवताको प्रार्थना गरेर रात कटाए। गोलीले छिया–छिया पारेको पर्खाल र पैतालाका अनगिन्ती छापले अघिल्लो दिन भीषण भिडन्तबीच बाँचेको संकेत दिलाएको थियो। ऋचाको डराएको मनलाई अरू आतंकित बनायो कृष्ण जन्माष्टमीको एउटा घटनाले। जुन उनलाई फिल्मजस्तै लाग्छ। सयौं व्यक्ति संलग्न रहेको झाँकी सहर परिक्रमा गर्दै थियो। भजन कीर्तनमा सबै मग्न थिए। ऋचा झाँकीको मध्य भागमा थिइन्, अचानक गोली चल्यो। एक व्यापारीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। साथीकी आमालाई गोली लागेको ऋचाले नजिकैबाट देखिन्। त्यो भीड एकछिनमै सुनसान बन्यो। दिन प्रतिदिन त्रासका घटना बढ्न थालेपछि उनलाई तुरुन्तै काठमाडौं फर्काउने व्यवस्था गरियो। काठमाडौं पनि सुरक्षित थिएन, खतरा कम थियो। त्यसैले उनका अभिभावक चाहन्थे, 'तिमी काठमाडौं नै बस, बरु बेला–बेला हामी नै भेट्न आऔंला।' बजार घुम्न र राजनीनिक गफ सुन्न रमाइलो मान्ने ऋचाले 'डरको शासन' कस्तो हुन्छ त्यतिबेला थाहा पाइन्। राम्ररी नचिनेको मान्छेसँग बोल्नसमेत बुबाले प्रतिबन्ध लगाइदिए। ...ऋचा काठमाडौंमा रत्तिन थालिन्। परिवार नर्स बनोस् भन्ने चाहन्थे, उनले 'सो बिज'को बाटो रोजिन्। साडी उडाउँदै पर्दामा प्रकट हुने करण जोहरका हिरोइनले उनमा गहिरो छाप पार्न थाले। देशमा युद्ध थामियो, छापामार युवती शिविर पसे। ऋचा अभिनयको 'क्लोज क्याम्प'मा दर्ता भइन्। छापामारले बन्दुक बुझाए, ऋचा हिरोइन भइन्। 'तिमी माओवादी छापामारको भूमिकामा अभिनय गर्छ्यौ?' ऋचाले काम गर्न चाहेका १० निर्देशकको सूची बनाएकी थिइन्, तिनैमध्येका अग्रणी निर्देशकको अफरलाई स्वीकार नगर्ने कुरै थिएन। उनको जीवनमा द्वन्द्वको प्रभाव त थियो तर छापामार युवतीलाई नजिकबाट नियाल्न पाएकी थिइनन्। छापामार बनाउलान् भनेर राजधानी छिरेकी ऋचा छापामारको भूमिका निर्वाह गर्न उत्साहित भइन्। आमा र दाइको मायामा हुर्किएकी, क्रान्तिका कविता लेख्ने, फरक सोचाइकी 'इप्रेसिभ' युवती कस्ती होलिन्? भूमिकालाई न्याय गर्न उनी खास छापामार युवतीको खोजीमा लागिन्। त्यस्तो पात्र भेट्न पत्रकार ईश्वर रौनियारले उनलाई सघाए। फिल्मले कल्पना गरेकै जस्तो छापामार भेटिन् ऋचाले। आर्मी दाजुकी माओवादी बहिनी, फरक विचारधारले छुटिनुपरेको, अझै पेटमा अड्किएको गोली बोकेर हिँडेकी ती छापामारबाट धेरै जान्ने आशा पलायो। 'माओवादीले 'माइन्ड वास्' गरेपछि स्कुल पढ्दा–पढ्दै युद्धमा लागेकी ती महिलाबाट धेरै कुरा थाहा पाएँ, मैले पत्रिकामा पढेको धेरै घटना उनको जीवनमा घटेको रहेछ। सुटिङमा आफूलाई तिनै महिलासँग तुलना गर्थें,' उनी भन्दै गइन्, 'माओवादीभित्रै हुने रेप केस, दुर्व्यवहार, असुरक्षा र युद्ध निकै दर्दनाक हुँदो रहेछ। के महिनावारी, के गर्भवती युद्धमा कसैलाई छुट नहुने सत्यकथाले आङ जिरिंग बनायो।' ऋचालाई त्यस्तै युवतीको रूपमा देखिने चुनौती थियो। त्यसैले ती छापामारलाई अघोषित सल्लाहकार नै बनाइन्, सम्पर्कमै राखिन्। आफ्नो छापामार रूप हेरेर 'सुहाएको' प्रतिक्रिया दिएपछि मात्र सुटिङको लागि तयार भइन्। माओवादीका भुक्तभोगीले 'दुरुस्त' देखिएको बताएपछि ऋचा ढुक्क भइन् 'मिस कास्ट' नभएकोमा। पौडी, परेड र युद्ध माओवादीकै विधिअनुसार भएको उनी दाबी गर्छिन्। 'क्याम्पमै प्रेम, विवाह र बच्चा जन्माउनु कति कठिन छ भन्ने पनि फिल्ममा छ,' फिल्मकै लागि झर्रो नेपाली सिकेको बताउन उनी पछि परिनन्। 'सबै गर्न सकियो त?' 'नसकेको भए छोड्थें,' उनले जवाफ दिइन्, 'माओवादीकै मान्छेले 'हिरोइन त माओवादीजस्तै देखियो' भनेपछि ढुक्क भएर खेलेकी हुँ।' ऋचाले 'उमा' खेल्दा हिरोइनको 'कस्मेटिक' विशेषता त्यागेकी छिन्। भद्दा शृंगार, स्कर्टले बेरिएको शरीर, अंग्रेजी मिसिएको संवादलाई छोडेर उनी 'रियल क्यारेक्टर' देखिने धुनमा छिन्। चलेको मानकलाई बेवास्ता गरेकी छिन्। मेकअपको नाममा टीका र गाजलमात्र छ। स्थानीयता झल्काउन जन्तर र मुन्द्री लगाएकी छिन्। थ्रेडिङ नगरेको आँखीभौंले ऋचा होइन उमाजस्तो देखिएको प्रतिक्रिया उनले फिल्मको ट्रेलर हेर्नेहरूबाट पाएकी छिन्। 'यो फिल्ममा मलाई हिरोइन होइन रियल क्यारेक्टर देखिनु थियो, भएको रहेछ भने कलाकार हुन सकेको ठान्छु,' उनी दर्शक प्रतिक्रिया जान्न व्यग्र छिन्। ऋचा भन्छिन्, 'फिल्मको मध्यान्तरपछिको दृश्यमा मैले साधारण मेकअप पनि गरेकी छैन।' तर, टिमभित्रका धेरैले त्यसैमा 'हट' देखिएको प्रतिक्रिया दिएपछि उनी चकित छिन्। 'नन् ग्ल्यामर'मा पनि 'ग्ल्यामर' देख्नेसँग उनलाई कुनै गुनासो छैन। 'कामुकता दृश्य होइन, दृष्टिमा हुन्छ भन्ने कतै पढेकी थिएँ, सायद त्यस्तै भयो कि!' उनी भन्छिन्। ऋचा आफूले निर्वाह गरेको चरित्रप्रति पूर्ण जानकार देखिन्छिन्। माओवादी द्वन्द्वमाथि बनेका अनेक नेपाली फिल्ममा चरित्र नै सुहाउँदो नभएको ठान्छिन्। माओवादीमा लागेका फिल्मकर्मीले नै बनाएका फिल्म स्वभाविक नबनेकै कारण आलोचित र असफल भएका छन्। माओवादीले बनाएको फिल्ममा माओवादी चरित्र नै कृत्रिमजस्ता लाग्छन्। यस्तो अवस्थामा 'उमा' को कसरी भर गर्ने? ऋचा समग्र फिल्मको जज गर्न सक्ने दाबी गर्दिनन्। 'स्टोरी टेलिङ मजाले भएजस्तो लाग्छ,' उनलाई यत्ति भरोसा छ, 'यो फिल्म बनाउन छिरिङ दाइले सात वर्ष रिसर्च गर्नुभएको छ रे। अर्थपूर्ण फिल्म बनाएर देखाइसकेका निर्देशकले यस्तो संवेदनशील विषयमा हाउडे फिल्म पक्कै बनाएनन् होला।' « हिरो अर्जुन कार्की सगरमाथा शिखरमा
'झोले'को झलक देखाइयो »